Ciidammada Ivory Coast oo mar kale gadooday - BBC News Somali
Ciidammada Ivory Coast oo mar kale gadooday
Image caption caasimada Ivory Coast ayaa laga maqlayaa sanqadha hub culus
Magaalada Abidjan ee caasimada Ivory Coast ayaa laga maqlayaa sanqadha hub culus kadib markii ay ciidamadu markii labaad sannadkan gadoodeen iyaga oo ka cabanaya heshiis mushahar kordhin iyo dhaqaale guno ah oo ay dowlada hore ula galeen baaqday.
Wariyaha BBC-da Tamasin Ford oo ku sugan magaaladaasi ayaa sheegey in ay dadku argagaxeen kadib markii rasaastu ka bilaabantay barxad ka soo horjeeda xarunta dhexe ee ciidamada.
Ciidamada gadoodey ayaa cadhoodey kadib markii uu saajin af-hayeen ahi isaga oo aan la tashan askarta uu muuq baahiyaha qaranka ka sheegey in ay ka noqdeen dalabkoodii.
Image caption Ciidammada Ivory Coast
Ma aha markii ugu horeysay ee ay ciidammadu gadoodaan, bishii koowaad ee sanadkan ayay sidoo kale ciidammadu gadoodeen, hase ahaatee 27-kii Janaayo ee sanadkan ayaa la qaboojiyay markii ay dowladdu ogolaatay waxyaabihii ay milaterigu dalbanayeen, hasayeeshee weli waxa muran ka taaganyahay qaabka loo hirgelin lahaa heshiskaas.
Ku dhawaad 8,000 oo askari ayaa midkiiba loo ballanqaaday 12 milyan oo CFA francs ah (oo u dhiganta $19,300), hase yeeshee waxba lagama bixin lacagtaasi ilaa hadda taas oo horseeday in mar kale ay ciidammadu gadoodaan.
Hogaamiyaha ciidmada ayaa la sheegey in uu u ambabaxay magaalada Abidjan si uu xaalada u soo dejiyo.
Dowladu wali kama ay hadlin gadoodka askartan.